Koorsada bilaashka ah ee gvSIG - Geofumadas
Koorsada bilaashka ah ee gvSIG
Febraayo, 2011 Baridda CAD / GIS, GvSIG
Iyada oo ku qanacsanaanta weyn waxaan kordhiyo fursad ah in loo soo bandhigay by CONTEFO fulinta 10 gvSIG koorsooyin free.
CONTEFO oo kaashaneysa Ururka GvSIG wuxuu bixiyaa dhiirigelin toban koorso bilaash ah heerka isticmaalaha. Koorsada u dhiganta shahaadada shahaadada "Heerka Isticmaalaha"Muddada saacadaha 60 inta lagu jiro toddobaadka 6 ee qaabka isdabajooga.
Xayeysiin gaar ah ayaa lagu qaban doonaa dhammaan codsiyada la aqbalay. Codsashadaada waa in la aqbalo waa inaad buuxisaa foomka ka-qaybgalka ee ka muuqda www.contefo.com/novedades ama www.contefo.com/moodle.
Soo dhaweynta codsiyada waxay ku dhamaan doontaa March 13 ee 2011.
Koorsadu waxay bilaabi doontaa 18 March 2011.
Diiwaanada Koorsada waxaa laga helayaa gudaha
Ujeedada dhiirigelintan ayaa loogu talagalay ardayda inay qiimeeyaan tayada koorsooyinka ay bixiso CONTEFO, maaddaama tayada ay tani tahay tiirarka asaasiga ah ee hawlaha tababarka ee shirkadda la dhisay. Ujeedadaas, bilawga koorsada, waxay noqon doontaa khasab ardayga la siiyay si uu u fuliyo sahan ku saabsan filashada koorsada iyo sahankan labaad ee tayada dhammaadka koorsada.
Xilligan, isqorista gvSIG - Tababbarka Miisaaniyada internetka ayaa si joogto ah u furan.
Waxaan rajeyneynaa inaad nasiib u hesho rafcaanka.
Kooxda Xiriirka La tashiga Tiknoolajiyada iyo Tababarka.
Post Previous«Previous Qalab CAD ah, qalabyada gvSIG
Post Next Sugitaanka Ipad 2Next »